Imidlalo ye-Brain 🥇 play online mahhala ku-Emulator.online
Imidlalo Yobuchopho. Ukuthuthukisa ukubonisana okunengqondo ngokusebenzisa Imidlalo Yobuchopho kubalulekile. Akusizi nje kuphela ukuthola imiphumela emihle kwinhlolokhono yomsebenzi noma ezivivinyweni zasekolishi, kodwa futhi kube nesandla ekugcineni ubuchopho bakho busebenza, ukuthuthukisa inkumbulo, nokwenza imisebenzi elula kube lula ukuyenza .
Uma ucabanga ukuthi awuqeqeshanga ubuchopho bakho isikhashana, kufanele uqale ukukwenza. Kufanele wazi ukuthi yabo amandla okuthuthuka nokufunda uhlala kuze kube sekupheleni kwempilo, ngakho-ke akukaze kwephuze kakhulu ukuqeqesha ukucabanga kwakho.
Ama-BrainGames: ungadlala kanjani igxathu negxathu?
Ukudlala abahloli online mahhala, nje landela le miyalo yesinyathelo ngesinyathelo :
Isinyathelo 1 . Vula isiphequluli sakho osithandayo bese uya kufayela le- Emulator.ku-inthanethi game Iwebhusayithi.
Isinyathelo 2 . Ngokushesha nje lapho ufaka iwebhusayithi, umdlalo uzovele uboniswe esikrinini. Kumele uchofoze nje Play futhi ungaqala ukudlala.
Isinyathelo 3. Nazi izinkinobho ezithile eziwusizo. Ungakwazi " Faka noma susa umsindo ", shaya" Play "inkinobho bese uqala ukudlala, unga" ikhefu "futhi" Qala kabusha "nganoma yisiphi isikhathi.
Isinyathelo 4. Gcina amakhadi ukhumbula ukuthi kumele abe avela kubabili abafanayo. Umdlalo uphela lapho ukwazi ukukhulisa wonke amakhadi. Lapho nje uqeda, uzodlula ileveli uze uqedele umdlalo.
Okushiwo Umdlalo WeBongo 🙂
Imidlalo Yobuchopho, noma imidlalo yokubonisana , yimidlalo evuselela futhi igqugquzele ukucabanga okunengqondo komuntu ukuze kuzuzwe ukwenziwa okuhle.
Le midlalo inesici zokuthuthukisa uhlangothi olunengqondo lomuntu, okwenza umsebenzisi kufanele asebenzise, ​​ngezinga elikhulu, uhlangothi lwabo lobuhlakani ukufinyelela isisombululo esifanele.
Le midlalo yokucabanga isetshenziswa kakhulu ngabelaphi. Kokubili ukwelulekwa ngudokotela, njengengxenye yesimiso ezindlini zokuhlala, asebekhulile bayakwenza lokhu ukuzivocavoca ingqondo ukuze ugweme izifo.
Izibonelo zegeyimu yobuchopho zifaka phakathi amagama aphikisayo, igama puzzle, nezimfumbe, I-Sudoku puzzle kanye nokunye okude.
Izinzuzo zemidlalo ye-Brain Game🤓
Ukuzivocavoca kwengqondo kuzuzisa kakhulu. Ngokwezifundo ezithile ukuqeqeshwa kwememori kungakhuphula "ukugeleza kobuhlakani," ikhono lokucabanga nokuxazulula izinkinga ezintsha.
Kunezinhlobo ezimbili zemidlalo ye-Brain Games. Bangu ngabanye imidlalo nemidlalo yamaqoqo.
Individual Brain Games khuthaza ukucabanga okunengqondo, okuhlaziyayo, okubonakalayo, ukuhlanganiswa kwezimoto, inkumbulo yokusebenza, nokucabanga okulandelayo.
Lapho umuntu edlala eyedwa, bahlangabezana nomzuzwana wokuziqhenya okukhulu futhi basebenzise amandla abo we ukutolika nokuxazulula izinkinga . Ngaleso sikhathi, unekhono lokwenza amasistimu wokuhlaziya nokusebenza kwempilo.
Imidlalo ehlangene , bona, lingisa izimo zokuncintisana kanye / noma zokubambisana , sisebenzisa wonke amakhono ashiwo ngenhla, ngaphezu kobudlelwano phakathi kwabantu.
Manje njengoba sesazi izinzuzo zokuba nomqondo osebenzayo, kungakuhle ukukwenza faka izivivinyo zeBrain Game enkambisweni yethu yansuku zonke ukuze ukuze uzuze kukho konke lokhu kuthuthukiswa futhi uthole ingqondo enkulu.
Izinhlobo Zemidlalo Yobuchopho 💡
Umdlalo wenziwa yi-American Howard Garns futhi usiza kufayela le- ukuqeqeshwa kokucabanga okunengqondo kwezibalo, ukugxilisa ingqondo nokuhlela . Ungayithola ku-inthanethi noma komagazini.
Ukudlala abahloli kusenza usebenzise bobabili ama-hemispheres wobuchopho . Izazi zokusebenza kwengqondo kanye nezazi ze-neurobiologists ziye zafunda ukuthi imidlalo yamaqhinga isiza kanjani ukusebenza kobuchopho, futhi kutholakale ukuthi ukudlala ama-checkers kubangela ukuthi izixuku zezindawo zobuchopho zisebenze ngasikhathi sinye, okusiza futhi ukuvimbela i-Alzheimer's.
Kusukela kubadali abafanayo be-Angry Birds, umdlalo omangazayo we-Alex ukhuthaza umsebenzisi ukuthi bathuthukise amakhono abo amasu ukuxazulula izinkinga ezethulwayo nokudlula esiteji.
Kulomdlalo umsebenzisi unenhloso yokuxhuma amashubhu ngemibala efanayo futhi adale ukulandelana. Kunezinselelo eziningi ezithi siza ngokubonisana, ukuxazulula izinkinga, ukushesha, nokugxila.
Umdlalo wakudala osakwazi ukuheha abadlali abavela kuwo wonke umhlaba. Isisekelo silula: ukwazi ukwenza yakha amagama phakathi kwe-tangle yezinhlamvu ezingahleliwe . Ngaphezu kwezinguqulo eziphrintiwe komagazini, kungenzeka ukuthola umdlalo wezinguqulo zeselula.
Kubhekwe umdlalo, chess kuthuthukisa ukucabanga, ubuhlakani, ukuthuthukiswa kwamakhono ezenhlalo, okuqonda nawokuxhumana . Ngaphezu kwalokho, lo mdlalo ungumlingani obalulekile wokuqeqeshwa kobuchopho. Umdlalo ungadlalwa ngokomzimba noma ku-inthanethi kumawebhusayithi we-chess game kanye nezicelo.
Ngale midlalo ye-Brain ungaqeqesha ingqondo yakho futhi ukwazi ukubhekana kangcono nemibuzo enengqondo, kungaba ngezivivinyo zakho noma ngoba nje ufuna ukugcina ingqondo yakho isesimweni.
Imithetho Yemidlalo YeBongo📏
Imidlalo yeLogic ayinayo imithetho yendawo yonke, ngamunye udlalwa ngemithetho yawo, kepha kunokuthile afana ngakho.
Sidinga uku sebenzisa ulwazi lokuqonda olufana nokubuka, ukubona, ukukhomba, ukuqhathanisa, ukuthola. Futhi sebenzisa ukubonisana okunengqondo, ukuhlela kusengaphambili, ukuthatha izinqumo ngisho nokufunda ukwazi ukudlala imidlalo ngokushelelayo nangobuciko.
Njengendlela isibonelo seBrain Game singasebenzisa i-chess . Uma sifunda imithetho yayo, ukunyakaza okuqondile, amasu angalandelwa ukuhlwitha izingcezu kulowo ophikisana naye bese sigcina ngokubulala iSilo, singathola umbono wokuthi lolu hlobo lokuzijabulisa luyinkimbinkimbi futhi lumnandi kangakanani engqondweni yethu.
Amathiphu wemidlalo yobuchopho 🤓
Imidlalo yeLogic ibeka inselelo ebuchosheni bethu, ngisho nasekubekezeleni kwethu. Lapho ukhetha igeyimu yobuchopho, qala ngemidlalo elula ebekela inselelo ingqondo yakho.
Ezinye zilula kepha zimnandi imidlalo yememori . Qala ngokukhumbula ukuma nokudweba kwamakhadi ambalwa, bese ukhulisa inombolo njengoba amandla akho okubamba anda. Ngaphandle kokuzuzisa, iyi- umdlalo wabo bonke ubudala , ukuze ukwazi ukudlala nezingane zakho.
Inhloso enkulu yale midlalo imnandi, ngoba ngokukujabulisa, izokwenza ingqondo yakho ingakhathali ngokushesha futhi amakhono okuqonda ukuthi lezi zinselelo zisho ukuthi kungaba njalo athuthukile , ngingaqapheli nakancane.
Thatha ithuba le izinzuzo eziningi ezinikezwa Amageyimu Engqondo futhi ujabule ngezinkulungwane zemidlalo engaphakathi kwalo mndeni.
Ngabe usalindeni ukushaya umdlalo?